Iflethi okanye indlu ekwicomple - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomple
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguDimitris
91% yeendwendwe zakutshanje zinike indawo izinga leenkwenkwezi eziyi-5.
Iflethi okanye indlu ekwicomplex yokuqala idibanisa ukubuka iindwendwe kwindawo ephakathi esixekweni. Iflethi ikwisakhiwo esinemigangatho eyi-2 apho kumgangatho wokuqala yiflethi okanye indlu ekwicomplex yokuqala ibe kumgangatho wesibini weFlethi okanye indlu ekwicomplex ekwicomplex.
Iflethi okanye indlu ekwicomplex yokuqala idibanisa ukubuka iindwendwe kwindawo ephakathi edolophini. Iflethi ikwisakhiwo esinemigangatho eyi-2 apho iflethi okanye indlu ekwicomplex yokuqala ibekwe kumgangatho wokuqala nakwiflethi okanye indlu ekwicomplex ekumgangatho wesibini.
Iflethi okanye indlu ekwicomplex entle enento yonke phakathi esixekweni. Iimitha eziyi-20 kuphela ukusuka kwisikhululo sebhasi ukuya elwandle kunye nesikhululo setreyini. Zonke iivenkile, iibhanki, iikhefi, iibhari zokudayiva, iivenkile zokutyela, njl. zingaphantsi kwemizuzu eyi-1. Isitrato sabantu abahamba ngeenyawo sibekwe ngaphaya kwendlela kwaye ngoko nangoko uphakathi esixekweni. Kwakhona kufutshane kakhulu kukho indawo yokupaka ebhatalelwayo. Ukusuka kwibhalkhoni yeflethi ungasonwabela ikofu yakho, ujonge intaba edumileyo yeOlimpiki kunye phambi kwesikwere se-Eucardi esilungisiweyo. Iflethi inazo zonke izixhobo ibe inazo zonke izinto ezinokusetyenziswa eziza kuqinisekisa ukuba uhlala kamnandi. Iflethi okanye indlu ekwicomplex yokuqala idibanisa ukubuka iindwendwe kwindawo ephakathi esixekweni. Iflethi ikwisakhiwo esinemigangatho eyi-2 apho kumgangatho wokuqala yiflethi okanye indlu ekwicomplex yokuqala ibe kumgangatho wesibini weFlethi okanye indlu ekwicomplex ekwicomplex. Kuquka ilifti, iiTV eziyi-2 ezineNetflix yasimahla, i-cd player/irediyo, ilaptop eyi-1, i-2 A/C enamandla (ukupholisa/ukufudumeza), ifoto eyi-1 yokudlala enezinto zokudlala kunye ne-wifi ekhawulezayo enesantya esiyi-100! !
Iflethi okanye indlu ekwicomplex emangalisayo enento yonke embindini wesixeko. Iimitha eziyi-20 kuphela ukusuka kwisikhululo sebhasi ukuya eParalia kunye nesikhululo setreyini. Zonke iivenkile, iibhanki, iikhefi, iibhari, iivenkile zokutyela, njl. zingaphantsi komzuzu omnye. Isitrato sabantu abahamba ngeenyawo sisesitratweni kwaye uphakathi esixekweni. Kukho nendawo yokupaka ebhatalelwayo ekufutshane. Ukusuka kwibhalkhoni yeflethi okanye indlu ekwicomplex unokonwabela ikofu yakho, ejonge iMount Olympus edumileyo kunye phambi kwesikwere se-Eukarpidis esibuyisiweyo. Iflethi inento yonke kwaye inazo zonke izinto ezenza uzive uthe zava eziza kuqinisekisa ukuba uhlala kamnandi. Iflethi okanye indlu ekwicomplex yokuqala idibanisa ukubuka iindwendwe kwindawo ephakathi edolophini. Iflethi ikwisakhiwo esinemigangatho eyi-2 apho iflethi okanye indlu ekwicomplex yokuqala ibekwe kumgangatho wokuqala nakwiflethi okanye indlu ekwicomplex ekumgangatho wesibini. Kuquka ilifti, iTV eyi-2 eneNetflix YASIMAHLA, i-cd player/irediyo, ilaptop eyi-1, ii-air conditioner eziyi-2 ezinamandla (zokupholisa/zokufudumeza), ifoto eyi-1 edlala imidlalo kunye neWiFi ekhawulezayo engenakutshintshwa eyi-100 Mbps !!!
\_u00A0Ibhedi enkulu eyi-1, ibhedi elala umntu omnye eyi-1, isofa ekwayibhedi eyi-1
5.0 · Izimvo eziyi-33
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi33
Ukuze ndihlale ngokukhuselekileyo kule ndlu, ndilungiselele ukuba oku kulandelayo kufakwe isicelo:
# Ukucoca iflethi okanye indlu ekwicomplex kwenziwa ngezinto ezikhethekileyo nezinto zokucoca.
# Bulala iintsholongwane uze unciphise iintsholongwane kuyo yonke indawo
# Faka i-gel ekhethekileyo yezandla (into yokubulala iintsholongwane) ukuze unciphise iintsholongwane kuzo zonke iintsholongwane.
# yiba nealam yomsi nesicimi-mlilo endlwini
# Bukela umnyango oyintloko imini nobusuku
Ukuze ukhuseleke kakhulu kwindawo yokuhlala, ndiqinisekise ukuba ezi zinto zilandelayo ziyasebenza:
# Ukucocwa kweflethi okanye indlu ekwicomplex kufuneka kwenziwe ngezinto zokucoca ezikhethekileyo.
# Coca kakuhle yonke indawo
# Yiba ne-gel ekhethekileyo yezandla (i-antiseptic) ukuze ulwe nazo zonke iintsholongwane.
# Yiba nomatshini olumkisayo xa kukho umsi nesicima-mlilo ngaphakathi eflethini
# Jonga eyona ndawo yokungena imini nobusuku
Umbuki zindwendwe ngu- Dimitris
Κατάγομαι από την υπέροχη Κατερίνη και ζω στην Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια. Είμαι παντρεμένος και έχω 2 παιδιά. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας και να σας προσφέρω μια ευχάριστη διαμονή.
Ndilapha ukuze ndikuncede ngayo nantoni na oyifunayo ngexesha lokuhlala kwakho.
Είτε τηλεφωνικώς, είτε μέσω viber ᐧ WhatsApp.
Ndikulungele ukukunceda ngayo nantoni na oyifunayo ngexesha lokuhlala kwakho.
Mhlawumbi ngefowuni, okanye nge-viber okanye ngoWhatsApp.
Ndikulungele ukukunceda ngayo nantoni…
Inombolo yomthetho: 00000754375
Iilwimi: English, Ελληνικά
Ixesha lokubhalisa xa ufika: Emva ko 13:00
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Katerini